ဆောင်းယွန်းလ – “အရာရာဟာနောက်ကျခဲ့တယ် ဂျူလီယာ” | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ – “အရာရာဟာနောက်ကျခဲ့တယ် ဂျူလီယာ”
ဆောင်းယွန်းလ၊ မေ ၂၃၊ ၂၀၁၄
ခရီးပေါက်အောင် ရောက်နိူင်ပါတယ် ဂျူလီယာ….
လောကထဲမှာ ရှာဖွေလို့ရနိူင်ပါတယ် ဂျူလီယာ….
နေ၀င်ချိန်တွေ နောက်ကျတယ်လို့ မရှိခဲ့ပါဘူး ဂျူလီယာ
ငါတို့ ဆန္ဒတွေမစောခဲ့ကြပါဘူး ဂျူလီယာ….
ယောင်မှားလို့တောင် ရောက်မလာခဲ့ကြပါဘူး ဂျူလီယာ….
အရာရာဟာ နောက်ကျနေခဲ့တာများလား ဂျူလီယာ….
စစ်ပွဲတွေနဲ့ ရောက်လာခဲ့သူတွေပေါ့ ဂျူလီယာ…
အရာရာဟာ နောက်ကျခဲ့ရပါတယ် ဂျူလီယာ…..
ငါတို့ဘ၀မှာ အကြောင်းကြောင်းတွေနဲ့ နောက်ကျခဲ့ရပါတယ် ဂျူလီယာ…
စံနစ်တကျ နောက်ကျကျန်နေခဲ့ရပါတယ် ဂျူလီယာ…
ငါတို့ရဲ့အရာရာဟာ နောက်ကျခဲ့ပါတယ် ဂျူလီယာ…
နောက်ကျမှုတွေနဲ့ နောက်ကျနေခဲ့ကြပါတယ် ဂျူလီယာ….။